उपकरणहरू "Nevoton" कम्पनी - उपभोक्ता समीक्षा
पुरातन समयका देखि मानिसजातिलाई ज्ञात चाँदी पानी असामान्य गुण। यो तत्व, मात्र प्राकृतिक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने विचार छ हाम्रो शरीर को स्वास्थ्य को लागि प्रभावकारी र सुरक्षित दुवै छ। चाँदी मानव शरीर थुप्रै Tissues फेला र एकै समयमा सबै आफ्नो सिस्टम को सामान्य कामकाज सुनिश्चित एक अग्रणी भूमिका खेल्छ छ।
यो अचम्मको तत्व को निको गुण पुरातन मिश्र बढी बासिन्दाहरू प्रयोग। चाँदी आफ्नो तीव्र निको प्रचार, को घाउ लागू र तिनीहरूलाई मा purulent प्रक्रियाहरू रोक्छ थियो। रूस मा, पानी यो अद्भुत तत्व, को अनुयायीहरूले लागि डिजाइन को आयनों संग सार्थक भयो। त्यो चाँदी जहाजहरु मा राखिएको थियो।
धेरै वैज्ञानिक अध्ययन आश्चर्य निहित निको गुण को तत्व को कि सक्रिय आयनों देखाएका छन्। चाँदी छ भन्दा सय र पचास-pathogenic मानव शरीर Fungi जीवाणुहरू र भाइरस जलाएर सक्षम छ। तुलना लागि, आधुनिक औषधी, एन्टिबायोटिक हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु मात्र पाँच दस प्रकार असर गर्न सक्छ।
संरक्षण र कायम गर्न जीव डाक्टर को स्वास्थ्य चाँदी पानी एक दैनिक सेवन गर्न सुझाव दिन्छौं। Estheticians, बारी मा, आफ्नो अनुहार धोइदिनुभएर लागि यसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह छन्। शेफ, यो पानी विभिन्न व्यञ्जन को तयारी मा प्रयोग गरिन्छ। मायालु आमा, यो आफ्नो बच्चाहरु नुहाउने उनको खिलौने सखाप र जहाँ बच्चा छ कोठा मा तल्ला धुन। चाँदी पानी लाभदायक र cottagers छ। तिनीहरूले बिरुवा र अपरिपक्व बिरुवाहरु पानी हाले को जरा को मद्दतले व्यवहार हो।
उपकरण आवेदन समीक्षाएँ जो घर मा "Nevoton आयोग-112", यसको उच्च दक्षता, पानी सक्रिय औषधीय चाँदी आयनों सार्थक पुष्टि। यो प्रक्रिया केही मिनेट लागि रहन्छ र मानिसको भाग मा कुनै पनि अतिरिक्त प्रयास आवश्यकता छैन।
सुसज्जित एक विशेष माइक्रोप्रोसेसर संग Ionizer चाँदी "Nevoton", को पकाउने पानी सान्त्वना चाहेको एकाग्रता पुष्टि समीक्षा जो। यो उपकरण दुई फरक मोड मा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई को एक, पिउने, खाना पकाउने र प्रत्यक्ष खपत लागि पानी संवर्धन लागि डिजाइन। दोस्रो मोड (ध्यान) सक्रिय आयनों को एक ठूलो संख्या संग तरल तयारी बढवा दिन्छ। यस्तो पानी धुन सक्छन् र पानी बिरुवाहरु।
चाँदी ionizers "Nevoton" मूल्यांकन यसको स्थायित्व संकेत जो, काम, पानी को साठी टन बनाउन सक्नुहुन्छ पिउने खुराक। तरल को यो रकम पूरै समायोजित गर्न सक्छन् रेलवे ट्यांक।
उपकरणको निर्माता माल यो उच्च गुणवत्ता पुष्टि समीक्षा जो रूसी कम्पनी OOO "NPF Nevoton" छ। को ionizer कम्पनी समावेश चाँदी गुण निको संग सन्दर्भ लागि अभिप्रेरित पुस्तकहरू पठाउँछ। समीक्षा जो को ठूलो बजार को लागि आफ्नो उपलब्धता संकेत उपकरण "Nevoton", को मूल्य, हजार बारेमा दुई छ। को ionizer मा ग्यारेन्टी यसको अधिग्रहण पछि एक वर्षको लागि मान्य छ।
निर्माता अनुसार उपकरण जब चिकित्सकीय कस्मेटिक संग संयोजन मा लागू गरियो एक सुधार प्रभाव चिनो जो प्रतिक्रियाहरू उपलब्ध "Nevoton एके-201" पनि छ। यो तपाईं योगदान जो दुई मिलिमिटरमा, गर्न छाला हेरविचार उत्पादन को प्रवेश को गहिराई वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ:
edema हटाउन, आदि
जुम्रा: परजीवी कसरी प्रदर्शन गर्न
Glycosylated हेमोग्लोबिन: महिला, डिक्रिप्सन र प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को दर
इलेक्ट्रनिक थर्मामीटर पारा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग मा रगत दाता दान गर्न? शहर रगत रगत सार्ने काम स्टेशन
विभिन्न उमेरका छोराछोरीको postural विकार को रोकथाम
को मेरुदण्ड लागि corset कसरी चयन गर्ने? सङ्केत गर्छ corset
हरेक स्वाद अनुरूप रंग: "Loreal INOA" प्यालेट
रूस मा काम पेंशनरहरुलाई गर्न पेंशन को भुक्तानी
"Paradontaks" टूथपेस्ट। औषधीय टूथपेस्ट
सान मार्को होटल2*, दुबई होटल विवरण, समीक्षा
जेनेटिक्स - यो ... जेनेटिक्स र स्वास्थ्य। जेनेटिक्स विधिहरू
संसारमा सबै भन्दा ठूलो वाहक। संसारको आधुनिक विमान वाहक
"भविष्यमा फर्कनुहोस्", "कसले रोजर खरगोश", "फोरिस गम्प" र अन्य चलचित्रहरू राख्नुभयो। रबर्ट जेमेकिस - सिनेमाको अभिनव
वाल्व, समायोज्य Genebre
दानियल Libeskind: जीवनी, परियोजनाहरु, काम
टर्की, Kemer सर्वश्रेष्ठ होटल। Kemer5ताराहरु 1 लाइन। वर्णन, मूल्यांकन, समीक्षा र प्रयोगकर्ता मूल्याङ्कन
औषधि "Traumeel" (मलम)। प्रयोगको लागि निर्देशन